Mpikatroka Jamaikana Voasambotra Teo Ambanin’ny Lalànan’ny Heloka Antserasera Noho Ny Hetsika Nokarakarainy Manohitra Ny Herisetra Mihatra Amin’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Mpikatroka Jamaikana Voasambotra Teo Ambanin'ny Lalànan'ny Heloka Antserasera Noho Ny Hetsika Nokarakarainy Manohitra Ny Herisetra Mihatra Amin'ny Vehivavy
Voadika ny 24 Marsa 2017 4:53 GMT
Ny dihy “manapaka sy manadio” nandritra ny diaben'ny Tafika Korintsana manohitra ny fanararaotana ara-nofo sy ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy tao Kingston, Jamaikà. Sary avy amin'i Storm Saulter tamin'ny 11 Marsa 2017, nahazoana alalana
Mitsapa ny fetran'ny Lalànan'ny Heloka Antserasera somary vaovao ao amin'ny firenena ny mpampanoa lalàna Jamaikana amin'ny tranga anenjehana an'i Latoya Nugent, mpikatroka nanonona ampahibemaso tao amin'ny media sosialy ny anaran’ ireo voalaza fa mpanao herisetra ara-nofo .
Nosamborina tamin'ny herinandro lasa i Nugent, ary voampanga teo ambanin'ny Lalàna Antserasera noho ny “fampiasana solosaina hanaovana fifandrasaina misy fikasan-dratsy” Efa noafahana vonjimaika izy rehefa nandoa onitra.
Mpiara-manorina ny Tafika Korintsana i Nugent, hetsika vaovao tarihan'ny vehivavy sy ireo niangana tamin'ny herisetra ara-nofo ary miresaka mivantana momba ny zava-niainan'izy ireo ao amin'ny aterineto sy any amin'ny andavanandrom-piainam-bahoaka. Nateraky ny fanambarana momba ny fanararaotana ara-nofo tamin'ny ankizy nataon'ny pasitera Paul Gardner, ao amin'ny fiangonana Moraviana, ny Tafika Korintsana dia nahazo fanohanana tamin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto, tamin'ny diabem-bahoaka tao amin'ny renivohitra Kingston tamin'ny volana Febroary. Niteraka adihevitra mafàna antserasera tao Jamaika ihany koa izany.
Iray amin'ireo paikady mampiadihevitra kokoa ataon'ny Tafika ny tenirohy #SayTheirNames (Lazao ny anaran'izy ireo), ka mandrisika ny vehivavy izy ireo mba hampahafantatra ny tantaran'izy ireo momba ny fanararaotana ara-nofo amin'ny alalan'ny fanambarana ny anaran'ireo mpiherisetra alohan'ny ahafahan'izy ireo miaro tena eo anoloan'ny mpitsara. Nosamborina i Nugent noho ny filazana tao amin'ny media sosialy ireo lehilahy maromaro fa mpametaveta, ka nametraka fitoriana ofisialy tany amin'ny polisy ny sasany tamin'ireo voatonona.
Mihevitra ireo mpomba ny hetsika fa lasa enta-mavesatra ho an'ny lasibatra ny lalàna ao Jamaika mikasika ny herisetra ara-nofo sy ny herisetra antokantrano (anisan'izany ny Lalàna momba ny Heloka Ara-nofo taona 2009), lohahevitra lehibe manahirana ao Jamaika sy any an-kafa. Zara raha taterina ao amin'ny firenena ihany koa ny fanolanana sy ny fanararaotana noho ny kolontsaina manamenatra sy manilikilika ny niharam-boina.
Saingy niteraka fanontaniana vaovao momba ny fampiharana ny Lalànan'ny Heloka Antserasera amin'ny tranga lahateny amin'ny aterineto ny raharaha anenjehana an'i Latoya Nugent.
Tahaka ireo lalàna antserasera hafa manerana izao tontolo izao, azo adika araka izay tiana ny lalàna ao Jamaika raha mikasika ny fifandraisana tsy ara-dalàna na “misompatra”. Tamin'ny toe-javatra ivelan'ny aterineto, ny fihetsik'i Nugent nanome anarana sy nanala baraka ireo mpiherisetra ara-nofo dia azo antoka fa sokajiana ho fanalam-baraka. Tamin'ny taona 2013, nanova ny rafitra fanalam-baraka mba horaisina ho raharaha sivily (ady madio) – fa tsy heloka bevava – i Jamaika. Raha fintinina, midika izany fa raha misy olona voampanga noho ny fanalam-barka ao Jamaika, azo saziana hampandoavina onitra izy, fa tsy azo omena sazy an-tranomaizina.
Raha nanonona ny anaran'ireo mpiherisetra teny amin'ny sehatra imasom-bahoaka tsy antserasera izy, tsy tokony manana antony ara-dalàna amin'ny fisamborana azy ny manampahefana
Satria nanonona ny anaran'ireo mpiherisetra teny amin'ny sehatra imasom-bahoaka ny Tafika Korintsana, tsy tokony manana antony ara-dalàna amin'ny fisamborana azy ny manampahefana. Saingy toa manome fahefana ho azy ireo fotsiny ny teny manjavozavo ao amin'ny Lalànan'ny Heloka Antserasera.
Naneho hevitra momba ny raharaha tao amin'ny Jamaica Gleaner, nanoratra i Tenesha Myrie, mpisolovavan'ny zon'olombelona hoe:
Toa fikasana hanameloka bevava ny fanalam-baraka amin'ny fomba ankolaka ny fampiasàna ny Lalànan'ny Heloka Antserasera, indrindra indrindra ny Fizarana faha-9, izay milaza fa fandikàn-dalàna ny fampiasàna solosaina amin'ny fifandraisana manaratsy,
Ohatra amin'ny fanamby vaovao atrehan'ireo mpikatroka ny raharaha satria tsy mitsahatra fehezina amin'ny alalan'ny karazana lalàna antserasera manerantany ny fanehoan-kevitra
Taorian'ny fisamborana an'i Nugent, namariparitra ny fahatsapany ilay bilaogera Jamaikana Annie Paul fa “miharatsy ny fahalalahana maneho hevitra” fomba fijery manakoako manerana ny faritra.
Nanjary anisan'ny antsoina hoe fihetsiketseham-paritra manatantara manohitra ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ny diaben'ny Tafika Korintsana. Nisy ihany koa ireo diabe tahaka izany nitranga tao Barbados (tamin'ny alalan'ny hetsika #LifeInLeggings) tao Guyana, tao Bahamas ary tao Trinidad sy Tobago, izay nanaovan'ilay mpikatroka Tillah Willah antso ho firaisankina amin'i Nugent:
[…] Mahita ny tena dikan'izany isika rehetra – fihazàna ireo vondrona mpikatroka izay manohitra ny fiarahamonina tsy te hiatrika ny olany mikasika ny fanararaotana ara-nofo amin'ny ankizy sy ireo hetsika hafa momba ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy
Tamin'ny Febroary 2007, rehefa nanaparitaka sary mampihorokoditra misy ireo vehivavy maty novonoina ny mpiserasera media sosialy sasany, nilaza ny mpampanoa lalànan'i Trinité sy Tobago fa mikasa hitondra fanovana amin'ny Volavolan-dalàna momba ny Heloka An-tserasera ao amin'ny Kabinetra izy mba hanakanana ny fitondrantena antserasera tsy tompon'andraikitra tahaka izao. Afaka mihatra amin'ireo “mpiserasera tsy malina”, izay mizara vaovao tsy nohamarinina ka mahatonga ny olona hikoropaka na ho saro-tahotra ihany koa ny lalàna.
Nizara ny pejy GoFundMe natao hanangom-bola ho an'ny fandaniana ara-pitsarana an'i Nugent ilay mpisera Facebook Trinidadiana Shaz Hudson, ary nampitandrina ny mpiray tanindrazana aminy mba “hitandrina”:
MITANDREMA azafady amin'ireo volavolan-dalàna mikasika ny fomba fampiasantsika ny media sosialy sy ny fomba fanehoantsika hevitra sy ny ho dikan'izany izay eo am-padinihana ao amin'ny antenimierantsika. Raha lasa lalàna izany, toa hita fa misavoritaka kely ihany ary mihevitra ny tranga ratsy indrindra. Jereo ireo tsy fahombiazana sy ny fomba hanaovana fitaovana ny teny ao anatin'ny lalàna.
Ho atao amin'ny 22 Marsa [efa notontosaina] ny fitsarana manaraka an'i Nugent. Mbola mitohy ny adihevitra mandra-pahatongan'izany.
4 andro izayJamaika
5 andro izayJamaika